ALAOTRA MANGORO : Hanao ny fivoriana voalohany ny ligin’ny atletisma
Hanao ny fivoriana voalohany amin’ity taona ity ny biraon’ny ligin’ny atletisma Alaotra Mangoro, ka nosafidiana manokana ny toerana hanaovana izany dia ny any amin’ny Horimbato. 7 janvier 2017
Araka ny nambaran’ny Filohan’ny Ligim-paritry ny taranja fototra atletisma Randriamarolaza Rodrigue dia isan’ny hodinihina manokana amin’io fotoana io ny hiatrehana ireo karazana fifaninanana isan-tsokajiny avy izay hotontosaina amin’ity taona ity sy ny fomba hoentina manetsika ny fampitomboana isa ny seksionina aty Alaotra Mangoro.
Haverina mihitsy ny lazan’ity taranja fototra ity, hoy ny Filohan’ny ligy, ka ilaina manokana amin’izany ny firaisan-kinan’ny mpikambana eny anivon’ny ligy sy ny seksionina ary ireo klioba tsirairay avy. Isan’ny tanjona hotratrarin’ny ligy ihany koa ny hisian’ny fampiofanana na ho an’ny mpanazatra izany na ho an’ny mpilalao mba hampitomboana ny fahaiza-manaon’ny rehetra ka ahafahana mampiakatra hatrany ny haavo teknikan’ny mpilalao.
Tanjona ny hahatafakatra avo dia avo ny lazan’ity taranja fototra ity. Nomarihiny manokana fa isan’ny nampirehareha ny zanak’Alaotra ny taranja atletisma tany aloha tany ary saika io hatrany no nandrombahana medaly betsaka indrindra.
Tsy vitsy no nandeha tany ivelany ary nitondra avo ny voninahi-pirenena, hoy izy. Haverina indray izany ka izay no antony hanaovana ny fivoriam-be voalohany amin’izao fiandohan’ny taona izao.